12. Olee otú ndị okenye na ụmụnna ndị ọzọ nwere ike isi nyere ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche aka? 12 Olee otú anyị nwere ike isi nyere ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche aka? E nwere otu okenye na-eje ozi n’otu alaka ụlọ ọrụ. Ya na ọtụtụ ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche akparịtala ụka. O kwuru, sị: “Ndị okenye na ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche kwesịrị ịna-akparịta ụka. Ndị okenye kwesịrị ịchọpụta otú ihe si dịrị ha ma kpebie otú ha ga-esi enyere ha aka. Ụfọdụ ụmụnna chere na a na-egboro ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche mkpa ha niile ebe ọ bụ na a na-enye ha ego mmachi akpa. Ma, e nwere ọtụtụ ụzọ ụmụnna nọ n’ọgbakọ ha nwere ike isi na-enyere ha aka.” Otú ahụ obi na-adị ndị ọsụ ụzọ oge niile ụtọ ma ụmụnna pụta soro ha rụọ n’ozi ọma ka ọ na-adị ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche. Ì nwere ike iso ha rụọ n’ozi ọma?
mailto:?body=Na-echeta Ndị Nọ n’Ozi Oge Niile%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2014687%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Na-echeta Ndị Nọ n’Ozi Oge Niile